Waran-cadde oo ka hadlay sida ay Bulshada Somaliland ku kala xulan karto Ururrada Siyaasadda ee u tartami doona Doorashada golayaasha Deegaanka | Berberanews.com
Home WARARKA Waran-cadde oo ka hadlay sida ay Bulshada Somaliland ku kala xulan karto...
Waran-cadde oo ka hadlay sida ay Bulshada Somaliland ku kala xulan karto Ururrada Siyaasadda ee u tartami doona Doorashada golayaasha Deegaanka
Hargeysa-(Berberanews)- Guddoomiyaha Garabka Siyaasadda Xisbiga UDUB Cali Maxamed Waran-cadde, ayaa sheegay in Ururrada cusub ee isu diyaarinaya inay ka qaybgalaan tartanka doorashada golayaasha deegaanka Somaliland bulshadu ku qiimayn doonto midba cidda uu dadka hor-keeno ee uu soo sharraxo.
Cali Waran-cadde, waxa uu dawladda ka dalbaday inay siidhiga si fiican ugu hayso ururrada tartami doona si aanay isugu kufin. Mr. Waran-cadde, waxa sheegay in ay filayeen in shan sannadood oo horumar ah la gali doono markii ay Xukuumaddii UDUB oo uu ka tirsanaa xilka wareejisay bishii July 2010, hase ahaatee, waxa uu xusay in horumarkaa beddalkiisa la galay shan sano oo doorasho ah.
“Mid waxaan faray bulshada reer Somaliand oo aan leeyahay waxa ay hoggaamiyeyaashu iidiin soo ban-dhigayaan ee aad ku aammini kartaan ku kala doorta midna waxaan farayaa Ururrada iyo asxaabta oo aan leeyahay dadku waxa uu idiin ku raaci doonaa kolba cidda aad hor keentaan, shacabkani waa shacab halgan dheer soo maray, duruufo badan baa soo maray, wax badan bay tabayaan oo hoggaamiye wanaagsan bay doonayaan.” Sidaa ayuu yidhi Cali Maxamed Waran-cadde oo shalay hadal ka jeediyey Xaflad lagaga dhawaaqay Urur cusub oo kuwa siyaasadda ka mid noqonaya oo lagu qabtay Huteel Ambassador ee magaalada Hargeysa.
Waxaanu Waran-cadde oo hadalkiisa sii wataa intaa ku daray oo uu yidhi; “Waxa jira Nimanka Sayladda joogaa Neefka Adhiga ah araggiisa kuma qaataan ee waxay tuujiyaan Dhabarka, markaas ayaad arkaysaa Wan wanaagsan oo ay reebeen, markaasaad odhanaysaa Waar maxaad u reebtay? Markaasay ku Odhanayaan Nabar ayuu lee yahay. Waxaan haddaba, idin lee yahay waxaad keentaan qaab ay Ninkaas shacabku Dhabarka qabtaan oo aan ka liicin Dhabarka, markaasay idin daba galayaane.
“Xukuumaddana mid ayaan odhanayaa, runtii waxaannu filaynay shantan sannadood inaan nabaddii iyo horumarkii aannu hirgalinnay halkaa ka sii waddaan, laakiin horumarkii maydaan sii wadine waxaad nugu jeediseen siyaasad shan sano ah, dawladdana waxaan ka codsanayaa si aanay ururradu isugu turun-turroon inaad Siidhiga si wanaagsan ugu haysaan..” ayuu yidhi Guddoomiyaha SIyaasadda Xisbiga mucaaridka ah ee UDUB Cali Maxamed Waran-cadde.
Previous articleSaraakiil ka tirsanaa Maamulka Puntland oo Qarax ku dhintay iyo Tirada Askar ku dhaawacantay
Next articleAmiin Arts oo Kartoon cajiib ah ka sameeyey Ururradda iyo Xisbiyada Siyaasadda Somaliland